उदित नारायणले मुख खोले, २२ वर्षसम्म ध'म्कीमा बाँचे, आ'त्मह'त्याको सोच समेत आयो
आजको मिति : २०७८ बैशाख ३१, शुक्रबार
उदित नारायणले मुख खोले, २२ वर्षसम्म ध’म्कीमा बाँचे, आ’त्मह’त्याको सोच समेत आयो
२०७७ असार २१, आईतवार
भारतीय फिल्म उद्योगमा आफ्नो ४० वर्ष पूरा गरिसकेका उदित नारायणले सन् १९८० मा उनको पहिलो फिल्म ‘उन्नीस बीस’ बाट फिल्म गायन यात्राको थालनी गरेका थिए । जसमा संगीत राजेश रोशनको थियो भने अमित खन्नाले लेखेका थिए । त्यो गीत उदित नारायणले मोहम्मद रफीसँग गाएका थिए ।
एक भारतीय सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘सन् १९८० देखि पहिलो काम पाउने सं’घर्ष अलग थियो । ६ देखि ७ व्यक्तिसँग मुम्बईमा एउटा कोठामा बस्थेँ । जुन सानो गाउँबाट आएको थिएँ त्यहाँ पिता किसान हुनुन्थ्यो । उहाँले डाक्टर, इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो तर लगाव भिन्न थियो ।
सं’घर्षका दिनमा मानिसहरुले भन्ने गर्दथे कि यो त अब कुनै कामको छैन । आफूसँग क्षमता हुँदासमेत मुम्बईका ठूला गीत सङ्गीतकारको ढोका ढक्ढकाएँ । बल्लबल्ल पहिलो काम पाएँ । त्यसपछि सन् १९८८ मा ‘कयामत से कयामततक’ नामको फिल्म आयो, त्यसपछि पछाडि फर्केर हेरेको छैन ।’
सन् १९९८ मा ‘कुछ कुछ होता हे’ बाट सफलता पाएपनि एउटा भिन्न सं’घर्ष सुरु भयो । लगातार ध’म्की आउन थाल्यो । ‘धेरै हावामा उडिस्’ भनिन्थ्यो । पैसाका लागि फोन आउन सुरु भयो । कामसमेत छोडिदिन भनियो । एउटा समूह थियो जसले मेरो नामको सुपारी दिएको थियो, जो मेरा कामका लागि असुरक्षित महसुस गरिरहेका थिए । यस्तो अवस्थामा मुम्बई क्रा’इम ब्रान्चले मलाई लगातार सहयोग गर्यो ।
सुरुमा सन् १९९८ मा तत्कालीन पु’लिस कमिश्नर एम एन सिंहले मलाई दुई प्र’हरी अधिकारी दिए । पछि जब राकेश मारिया आए उनले पनि स’तर्क रहन भने । उनले पनि मलाई सु’रक्षा प्रदान गरे । यो सबै कुरा प्र’हरीको दस्तावेजमा रेकर्ड छ ।’
एक समय लखनउबाट मेरो नामको सुपारी लिएका केही मानिस आएका थिए । त्यतिबेला प्र’हरीले स्थिती नि’यन्त्र’णमा लियो । अर्को एक पटक पनि ममाथि ह’म’ला गर्ने तयारी भएको थियो । मैले सन् १९९८ देखि २०१९ सम्म ध’म्कीयु’क्त फोन पाएँ । कतिपटक त ह’त्या गरिदिने ध’म्की पनि पाउने गर्थेँ । गा’ली गलौ’ज त हरेक फोनमा पाउँथे ।’
उनले भने, ‘भाइ, त्यस्तो केही होइन, खासै राम्रो कमाई छैन, एउटा गीतमा १५ देखि २० हजार भारु कमाउँछु’ भनेर सम्झाउनु पर्दथ्यो । तर कसैले सुनेनन् । लगातार २२ वर्ष मैले ध’म्की सुनेर बिताएँ ।’
ध’म्की दिनेहरुको मुख्य उद्देश्य मलाई त’नाव दिनु थियो । मैले आफ्नो राम्रो गर्न नसकोस् भनेर उनीहरुले मलाई तना’व दिने गर्दथे । सुरुसुरुमा मलाई पक्कै पनि ड’र लाग्थ्यो । थुप्रै रात ननिदाइकनै बित्थे । कतिपटक डिप्रे’शनमा गएँ । आ’त्मह’त्या सम्मको विचार आयो, तर एक सै’निकले झैं डटिरहेँ ।’
‘जीवन सजिलो त छैन । सम’स्याको समाधान कहिले निडर भएर गरेँ कहिले नरम भएर । प्र’हरीबाट पनि सहयोग पाइरहेँ पहिलो चरणमा सन् १९९८ देखि सन् २००२ सम्म मसँग दुई मेसिन ग’नधा’री प्र’हरी अधिकारी सँगै रहन्थे । ’
केपी ओलीले तेस्रो पटक लिए प्रधानमन्त्रीको सपथ
तपाईंको आज : २०७८ वैशाख ३१ शुक्रवारको राशिफल
मोटरसाइकल दु’र्घटनामा परी चालकको मृत्यु
तपाईंको आज : २०७८ वैशाख ३० बिहिवारको राशिफल
भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा ४ हजार २०५ जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाए !
चितवनमा कोरोना संक्रमित ८ जनाको मृत्यु
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नर्सको उच्च प्रशंसा
भक्तपुरका अस्पतालमा शय्यामा छट्पटाउँदै बिरामी, सकियो अक्सिजन
ट्याक्सी दु’र्घट’ना हुँदा दुई जनाको मृत्यु
तपाईंको आज : २०७८ वैशाख २९ बुधवारको राशिफल
कोभिड–१९ संक्रमणबाट बागलुङमा थप दुई जनाको मृत्यु
सुदूर पश्चिम प्रदेशमा एकै दिन ३१ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
राशिफलतपाईंको आज : २०७८ वैशाख ४ शनिवारको राशिफल
त’स्कर भगाउन प्रहरीकै मिलेमतो; चाँदीमा सुनको जलप लगाउन ५२ लाख खर्च
एउटी १७ बर्षकी किशोरीलाई मानसिक र सामाजिक उत्पीडन किन ?’ : रेखा थापा
केपी ओलीले तेस्रो पटक लिए प्रधानमन्त्रीको सपथ deeyanmedia.com/16753/	... See MoreSee Less
काठमाडौं, ३१ बैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । शीतल निवासमा आयोजना गरिएको ....
तपाईंको आज : २०७८ वैशाख ३१ शुक्रवारको राशिफल deeyanmedia.com/15709/	... See MoreSee Less
२०७८ वैशाख ३१ शुक्रवार, द्वितीया - ईद उल फितर, अक्षय तृतीया व्रत, परशुराम जयन्ती - 14 May 2021
शनिवार ३ बजे दिपिका जेनी युट्युब मार्फत यहाँहरुको माझ , हेर्न नभुल्नुहोला जिस्किएर गई.... ! youtube.com/channel/UClfiCywPQAMS0eVmOwpUB_g	... See MoreSee Less
चितुवाको छा'ला सहित एक जना पक्राउ deeyanmedia.com/16745/	... See MoreSee Less
काठमाडौं, ३० बैशाख । सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–३ स्थित कुरिलेबाट प्रहरीले चितुवाको छा'ला सहित एक जनालाई पक्....
मोटरसाइकल दु'र्घटनामा परी चालकको मृत्यु deeyanmedia.com/16743/	... See MoreSee Less
झापा, ३० बैशाख । झापाको मेचीनगर नगरपालिका–१० स्थित टीकापुरमा भएको मोटरसाइकल दु'र्घटनामा परी चालकको मृत्यु भएको छ...